Madaxweynayaashii hore Sh. Shariif iyo Xasan Sheekh oo la kulmay Madaxweynihii hore Cali Mahdi | Sagal Radio Services
Madaxweynayaashii hore Sh. Shariif iyo Xasan Sheekh oo la kulmay Madaxweynihii hore Cali Mahdi
Sagal Radio Services • News Report • September 29, 2019
Kulankan ayaa la sheegay in saddexdan madaxweynayaashii hore ee dalka hore u soo maray waxa ay ugaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo siyaasadda dalka halka ay marayso.
Madaxweynayaashii hore ayaa kulanka iskula soo qaaday xayiraadii dhowaan la saaray magaalada Kismaayo taasoo saameysay mid kamid ah madaxweynayaashii dalka soo maray iyo mas’uuliyiin kale sida ay jowhar,com u sheegeen siyaasiyiin kulanka goobjoog ka ahaa.
Ilo ku dhow dhow kulankan ayaa ii sheegay in looga hadlayay xaaladaha amni iyo siyaasad ee dalka, iyaga oo muujiyay walaac ay ka qabaan sida ay wax u socdaan iyo waxa ka dhalan kara xaaladaha cakiran ee dalka ka jira, si loo ilaaliyo dowladnimada Soomaaliya, waxey is tuseen xaaladaha iyo caqabadaha jira, lagama maarmaannimada in la helo degenaansho siyaasadeed.
Kulanka saddexda madaxweyne